DF Oo Shaacisay In La Dilay Maxamed Cabdi Toosoow - Wararka Maanta
Muqdisho (Wararka Maanta) – Militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo gaar ah oo ka tirsan xoogga dalka ay degaanka Daarusalaam oo hoos taga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku dileen horjooge Maxamed Cabdi Suubiye, oo loo yaqaan Toosoow, oo ka tirsanaa madaxda sar sare ee kooxda Al-Shabaab.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odowaa Yuusu Raage ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in Toosow lagu dilay howlgal qorsheysan oo ay ciidamada ka fuliyeen aagga Masaajid Cali Gaduud.
Jeneral Odowaa ma shaacin xilka uu Maxamed Cabdi Suubiye Toosoow ka hayey kooxda Al-Shabaab.
Dilka Toosoow ayaa yimid maalin kadib markii Ciidanka Xoogga Dalka ay 15 ka tirsan Al-Shabaab ku dileen howlgal ay ka sameeyeen inta u dhaxeysa Tuula-Xaayow iyo Ceel-dheere oo jihada koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamada dowladda ayaa dhowaanahan dagaallo culus Al-Shabaab kula jiray gobolka Shabeellaha Dhexe, ayada oo qorshaha uu yahay in halkaas laga sifeeyo kooxdan, waxayna sheegteen guulo waaweyn oo ay ka gaareen dagaalka.
Ciidamada ayaa sidoo kale laba toddobaad kahor sheegay in howlgal ay Danab ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka, gaar ahaan Sabuun, Baaroow Madiina Cade, Gaaleef iyo Buurdhee, ay ku dileen 8-kamid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wararka Maanta : Markabkii ugu horeeyay ee Itoobiya leedahay oo kusoo xidhay dekeda Berbera
Wararka Maanta : Sacuudiga oo wax ka beddel lama filaan ah ku sameeyay shuruucdii xilli...
Wararka Maanta : Dowladda Maraykanka oo ka hadashay duqayn jimcihii shalay lagu garaacay...
Wararka Maanta : Daacish oo dagaalyahano kusoo bandhigtay BARI + Sawirro
Wararka Somali40 mins ago